कथा कम, ज्योतीषमाथि भर ज्यादा – An Online Entertainment News Portal
HomeGalleryCelebrityकथा कम, ज्योतीषमाथि भर ज्यादा
November 5, 2018 Tulasa Karki Celebrity, Entertainment, Feature News, Gossip, News 0
अभिनेत्री केकी अधिकारी ‘कन्याकुमारी’ फिल्म बनाउन तम्सिएकी छिन् । पहिलो फिल्म कोहलपुर एक्सप्रेस किन साउथ फिल्मबाट चोरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन उनले अहिलेसम्म आवश्यक ठानिन् । तर, उनी अहिले ‘कन्याकुमारी’ फिल्म बनाउन तयार छिन् ।
केकी अधिकारीले कन्याकुमारी फिल्म बनाउँदा एउटा कुरा याद गरौ । उनले बनाएको पहिलो फिल्म र बनाउन लागेको दोश्रो फिल्मको नाम ‘क’ बाट नै सुरु भएको छ ।
के यो संयोग मात्र हो त ? केकी अधिकारीलाई ज्योतिषले नै ‘क’ अक्षर फाप्ने बताइदिएपछि उनी ‘क’बाटै फिल्म बनाउन तम्सिएकी हुन् । यसलाई संयोग मात्र मान्न त सकिदैन । केकी अधिकारीले पहिलो फिल्म साउथ फिल्मबाट कथा चोरेर बनाइन् । दोश्रोको कथा कस्तो बन्छ भन्ने त अहिले थाहा हुँदैन । तर, उनी ज्योतिषमाथि ठूलो भर गरिरहेकी छिन् ।
फिल्म छक्का पन्जा ३ को ट्रेलर रिलिज गर्ने क्रममा बिहानको साढे ८ देखि ९ भित्रमा नै हलमा ट्रेलर बजाइएको थियो । यसको कारण, समय मिलाइएको होइन । निर्देशक दीपाश्री निरौलालाई ज्योतिषले दिएको समय तालिका अनुसार नै यो सेड्यूल मिलाइएको हो ।
छक्का पन्जा २ को नाइलको साडीमा गीत सार्वजनिक गर्दा पनि यस्तै समय मिलाइएको थियो । दीपाश्री पनि कथा भन्दा ज्योतिषमा बढी विश्वास गर्छिन् । संयोग नै मानौ कि के, दीपाश्रीलाई ज्योतिषले हेराएको फापेको पनि छ ।
नेपाली फिल्म बनाउनेहरु कथावस्तु, मेकिङमा भन्दा बढी ज्योतिषमा भर पर्छन् । फिल्म कस्तो बनाउने भन्दा पनि ज्योषितले दिएको सूची अनुसार बिषयवस्तु सार्वजनिक गर्ने, नाम त्यही अनुसार नै जुराउने उनीहरुमा रोग नै छ ।
फिल्म ‘ए मेरो हजुर २’ निर्देशन गर्दा त झरना थापाले हरिहर अधिकारीसँग पुरै सल्लाहा गरिन् । यतिमात्र कि, उनले त कथाको सुरुवात पनि ज्योषितले भनेको समय अनुसार गरिन्, त्यही अनुसार लेखिन् । फिल्मको कथा लेख्दा पनि समय हेर्ने भनेपछि, अरु के चर्चा गर्न आवश्यक भयो र ?
नेपाली फिल्मको कथावस्तु कमजोर छन् । दर्शकले फिल्मको कथावस्तु हेरेर नाक खुम्च्याउने अवस्था पनि छ । तर, अधिकांश फिल्म बनाउनेहरु ज्योतिषले दिएको समय अनुसार, नाम अनुसार फिल्म बनाए चल्छ भनेर मख्ख छन् ।
फिल्मको कथावस्तुमा ध्यान दिए त दर्शकले पनि रुचाउलान् । तर, बिहान ८ बजे ज्योषिसले भनेर ८ बजे नै प्रचार सामाग्री रिलिज गरेर फिल्म चल्ने भए, विश्वभर सबै फिल्म बनाउनतर्फ नै लाग्थे होलान् नी । ज्योषित विज्ञापनमा पनि भर पर्न आवश्यक छ । तर, पहिले कथावस्तुलाई दमदार बनाउन तिर पनि सोचौ नै होइन र ?